Jawaab celinta Grantee waxay horumarinaysaa hagaajinta
Qaab-dhismeedka Istaraatiijiyada McKnight Foundation waxay sheegaysaa in "Waxaan aaminsanahay inta badan awoodda iyo saameynta shaqadayadu ay ka timaaddo tayada xiriirkeena ee aan la leenahay dadka ugu dhaw arrimaha aan wax ka qabaneyno." Guuladayada muddada-dheer waxay kuxirantahay iskaashiga xooggan ee shanta sano ah . Sidaa daraadeed, suurtagalinta natiijooyinka ugu fiican, waxaan mar walba raadineynaa siyaabo aad ku taageeri kartid iyo xoojin lahayd xiriirada muhiimka ah. Iyo meesha ay ka fiican tahay in laga bilaabo waydiisanayaan deeq-bixiyeyaasheena jawaab celin daacad ah? Waxaan ku faraxsanahay in aan la wadaagno natiijooyinka McKnight ee wareegga ugu dambeeyay ee deeqda deeq bixiyeyaasha, oo lagu daray qaar ka mid ah qorsheyaashayada horumarinta.
Shaqaalaha Barnaamijka iyo Bulshada ee barnaamijyada iyo deeq-bixiyeyaasha xafiisyadayada dhowaan la soo ururiyey.
Laga soo bilaabo 2003, McKnight ayaa qandaraas la galay Xarun loogu talagalay haybadda wanaagsan, oo ah hay'ad cilmi baaris oo aan faa'iido doon ahayn, si ay uqorto deeq-bixiyeyaasha dhowaan yimid. CEP wuxuu soo ururiyaa war-celin qarsoodi ah oo ku saabsan dhinacyada kala duwan ee shaqadayada, laga bilaabo geeddi-socodka deeq-lacageedka illaa isgaarsiinta, waxqabadka, iyo saameynta beesha. Ka dibna waxay isbarbardhigaan natiijooyinka si ay u helaan fikradaha kale aasaasaha Mareykanka, isku xirnaanta jawaab celin McKnight gaar ah oo leh aragti qaran oo faa'iido leh. Sahan kasta oo cusub, guddiga iyo shaqaalaheenu waxay wakhti u qaadaan si ay u falanqeeyaan waxa aan bartay iyo inaan tilmaamo tallaabooyin gaar ah oo lagu hagaajinayo. Muhiimadda, warku had iyo jeer ma fiicnayn ... Sanadkii 2010, qiimeynta deeqaha waxay dhigtay McKnight gudaha ugu hooseeya heer qaran ahaan sida aan ula xiriirno ujeedooyinka barnaamijka iyo istaraatiijiyadaha, keenaya wada-hadal gudaha ah iyo isbeddello dhawr ah waa maxay iyo Goorma iyo sida waxaanu la xiriirnaa deeq-bixiyeyaasha. Waan ku faraxsanahay, qiimeynteena isgaadhsiinta ayaa aad uga wanaagsan waqtigan. (Wax badan oo ku saabsan hal daqiiqo.)
Dayrtii la soo dhaafay, CEP wuxuu daraasad ku sameeyay 374 qof oo ka mid ah deeq bixiyayaasha McKnight ee sannadkii hore, heerka jawaabta ah ee ku dhowaad 67% kuwa la xidhiidhay. (Our neuroscience iyo barnaamijyada caalamiga ah waxay adeegsadaan hababka kala duwan ee jawaab-celinta, oo aan lagu darin sahankan.) Waxaan ogaanay in McKnight lagu qiimeeyay heer sare ee saameynteena dhinacyada beeraha, beelaha iyo deeq-bixiyeyaasha. Sidoo kale, qiimeynta qaabsocodka dib-u-eegista deeqaha ayaa kor u kacay tan iyo sanadkii 2010. In ka badan 60% deeq bixiyayaashu hadda waxay soo sheegaan inay helaan nooc ka mid ah gargaarka aan lacagta ahayn ee McKnight marka lagu daro deeqda. Dhanka kale, heerarka qanacsanaanta ayaa hoos udhacay warbixinta warbixinta McKnight iyo hababka qiimeynta, aag aan isku dayeyno wanaajin ka dib markii qiimeyn hooseeya ee sahanka hore. Dhab ahaan nalalka waxaan weli u baahanahay in la jabiyo. Qoto dheer ka-soo-rogista Warbixinta Helitaanka Deeqaha ee 2013-ka waa internetka.
Jaantuska ayaa laga soo jaray warbixintii McCnight ee 2013 ee CEP-da Dakhliga Xeeladda. (Click to enlarge.)
Sida kor ku xusan, qiimeynta macaamilka McKnight ayaa si aad ah u kordhay sahankan ugu dambeeyay; gaar ahaan, "faahfaahinta isgaarsiinta" ayaa ka soo booday ugu hooseeya quartile of ratings of qaran ahaan si ay u dhow ugu sareeya quartile Qaar ka mid ah fikradaha ku saabsan waxa kor u qaaday kor u kicinta:
Waxaan kordhinay guulaha. Barnaamijyada oo dhan, waxaan hirgelinay siyaasad u baahan dhammaan deeq-bixiyayaasha si ay ula hadlaan wakiil barnaamij una xaqiijiyo taakuleyn istiraatiiji ah, ka hor soo gudbinta baaritaan rasmi ah. Waxaan u qaabeynay tan kaddib markii la sameeyey mudo dheer oo ah barnaamijkayaga Deegaanka, oo guud ahaan heleen calaamadaha ugu sarreeya ee ku-deeqaha 'fahamka ujeeddooyinka barnaamijka.
Waxaan ku darnay dhibco xidhiidh. Barnaamijyo dhowr ahi waxay qaateen ama kordhiyeen shirarka deeq bixiyeyaasha sannadka oo dhan, si ay dib ugu eegaan istaraatiijiyooyinka ayna ku casuumaan su'aalo iyo talooyin. Waxa kale oo aanu ku darnay waraaqo cusub oo la mid ah sida sahan qarsoodi ah oo ku xiran hannaankayaga deeq-lacageedka, taas oo si toos ah u keentay in si dhaqso ah loo hagaajiyo codsigeena deeq-lacageedka sida xaddidaadda ereyada oo kordhay, marin habaabin, dokumenti fudud oo la geliyo, iyo in kale.
Waxaan nadiifinay ficilkeena. Ka dib warbixintii 2010, waxaan dib u habeynay tilmaamaha deeqda ee barnaamijyada loogu talagalay joogteynta iyo luuqada fudud ee akhriska. Waxaan dajinay heerar sida hagid 48 saacadood ah oo looga jawaabayo emails iyo soo wicitaanada soo socda. Oo waxaannu ku darsannay talo-bixinta deeq-bixiyeyaasha qorshayaasha horumarinta shaqaalaha shaqaalaha shakhsi ahaaneed - wax ka qabashada caqabadaha iyo dhisida xoogga, waayo khibradaha deeq bixiyeyaasha ee joogtada ah.
Waan wada hadlnay! Waxaan ka faa'iideysanay ra'yiga 'ra'yi celinta' ee wadahadal gudaha ah, sida xusuusinta ku saabsan guud ahaan u baahan tahay si cad iyo isku dheelitirnaanta sida aan ula xiriirno. Xagga McKnight ee guddiga iyo shaqaalaha, si deg deg ah oo si joogta ah u hadla oo si joogta ah uga hadla cidda aan nahay iyo waxa aan ka soo bixinay darawalnimada horumarinta Qaab-dhismeedka Istaraatiijiyada ee McKnight, oo la sii daayay 2011.
Marka la eego warbixinnada Diiwaan-gelinta CEP-da ee Diiwaan-gelinta, sanadkan waxaanu eegay xogta ugu dambeysa, waxaana lagu ogaaday fursado badan oo lagu hagaajin karo. Hadafka ugu weyn, yoolka ugu wayn ee aanu ku leenahay waa inaan si adag u shaqeyno ilaali oo sii wad deeq bixiyeyaasha 'ratings of ratings of tallaabooyin badan. Laakiin waxaan sidoo kale diiradda saaraynaa hagaajinta fikradaha ku saabsan warbixinta iyo qiimeynta McKnight, tayada isdhexgalka oo joogto ah, iyo qanacsanaanta guud ee hannaanka deeq-lacageedka. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ku xiran "Qorshe hawleed" ee hoos ku xusan, laakiin si kooban, liiskayaga aan ku tallaabsanay ee horey u sii socda:
Hagaajinta waaya-aragnimada deeqda leh ee noo warbixinta iyo qiimeynta hababka barnaamijyada.
Kaalinta dareenka joogtada ah ee deeq bixiyaha marka la eego tayada isdhexgalka iyo ku qanacsanaanta hannaanka deeq-lacageedka.
In la ilaaliyo fikradaha wanaagsan ee McKnight's saameyn ku yeelashada beeraha, beelaha, iyo ururada deeq bixiyaasha.
Badbaarinteena caddaynta isgaadhsiinta yoolalka iyo xeeladaha.
Waxaan si taxadar leh u hubin doonaa arimahan. Waxaan ku dhiirigelineynaa ficiladaada joogtada ah ee ku jira boggan, annaga annaga foomka jawaabcelinta bogagga, on Facebook ama Twitter, ama shakhsi ahaana adoo adeegsanaya McKnight waxad ka arki kartaa xafiiskeena ama bulshada dhexdeeda. Waxaannu kuugu soo dhawaynaynaa inaad nala socodsiiso sida aan u qabanayno. Inkasta oo lacagta aan bixinno ay tahay mid muhiim ah, hantida ugu wayn ee McKnight waa cilaaqaadkeena la-hawlgalayaasha barnaamijka - ugu horrayn, boqollaal shaqaale ah oo shaqeynaya oo awoodda siiya deeqda lugaha iyo gacmaha iyo aragtida si ay u sameeyaan isbedal joogto ah maalin kasta. Warbixinta McKnight ee 2013 Warbixinta Helitaanka Deeqaha (Grantee Algebra) waxay siinaysaa fikradaha kaliya ee aan heleynin aragtida deeqaha, laakiin sidoo kale siyaabo muhiim ah oo ay shaqaalahayagu ugu fiicnaan karaan raacitaanka shaqadayada iyada oo xoojineysa xidhiidhada muhiimka ah ee deeqaha. Ugu dambeyntii, waxaan aaminsanahay wixii deeq-bixiyeyaasheena sheeg annaga, iyo waxa aan samee Macluumaadkaas, waxay naga caawin kartaa samaynta deeq-bixiye istiraatiiji ah oo wax ku ool ah.
Xidhiidhada la xiriira
Warbixinta Dakhliga Sheega ee Grantee 2013 (PDF, 365 KB)
McKnight Waxqabadka Qorshaha Waxqabadka ee Natiijooyinka Sahan (PDF, 19 KB)